A Year of Running ကို အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့တဲ့ မက်ဇူကာဘတ် - YOYARLAY Digital Media and News
A Year of Running ကို အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့တဲ့ မက်ဇူကာဘတ်
Published: December 27, 20166:39 am Updated: February 12, 201910:02 am
Facebook တည်ထောင်သူ မတ်ဇူကာဘတ်ဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကို A Year of Book လို့ အမည်ပေးခဲ့ပြီး စာအုပ်ပေါင်းမြောက်များစွာကို ဖတ်ခဲ့ ပါတယ်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်ကိုတော့ A Year of Running လို့ အမည်ပေးခဲ့ပြီး သူပြေးခဲ့တဲ့ မိုင်ဟာဆိုရင် ၃၆၅ မိုင် ရှိပါတယ်။
ယင်း မိုင်ပေါင်း ၃၆၅ ကျော်ဟာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ပြေးခဲ့တဲ့ မိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပျမ်းမျှဆိုရင် တစ်ရက်ကို ၁ မိုင်နှုန်း ပြေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ အချို့ရက်တွေဟာ တစ်မ်ိုင်ထက် နည်းတာမျိုးလည်း ရှိကြောင်း ရေးသား ဖော်ပြထားပါတယ်။ ၁၀ မိနစ်ထက် မပိုတဲ့ ပြေးရတဲ့ နေ့များလည်း ရှိကြောင်း ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်နှစ်ပြန်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါ တစ်ရက်ကို ၁ မိုင်နှုန်း ပျမ်းမျှပြန်ထွက် ပါတယ်။ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခရီးသွားရလည်း ရောက်ရာနိုင်ငံမှာ ပြေးပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ ပြေးခြင်းဟာ ဦးနှောက်ကိုဆေးကြောခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ပိုလို့လည်း သန်မာလာစေကြောင်း ဆိုပါတယ်။
လာမယ့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်ဟာ သူ့အတွက် Triathlon နှစ်ဖြစ်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Triathlon ကို Ironman sport လို့လည်းခေါ်ပြီး ရေကူး ၊ စက်ဘီးမောင်း ၊ အပြေး အားကစားသုံးမျိုး ပေါင်းစပ် ပါဝင်တဲ့ အားကစား ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း အားကစားလုပ်ဖို့အတွက် သူဟာ စတင် လေ့ကျင့်တော့မှာ ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇ မှာ Ironman အားကစား ပြိုင်ပွဲ များကို ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း သူ့ရဲ့ စာမျက်နှာမှာ ရေးသား ဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်။.
Ref: mashable; “Mark Zuckerberg had two personal challenges for 2016. What happened to running?”
Previous Previous post: စမတ်ကျတဲ့ဘဝ၊ စမတ်ကျတဲ့ရည်မှန်းချက်
Next Next post: “ဂေါ်ရင်ဂျီကျွန်းစုတွေဆီက ဆွတ်ပျံ့ကြည်နူးဖွယ် အပန်းဖြေစခန်း “The Log” (The Lodge of Goryangyi) တည်ထောင်သူ ကိုဇိုဇို (ခေါ်) ကိုသက်မောင်လွင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း”
၂၀၄ဝခုနှစ်မှာ ဓာတ်ငွေ့နဲ့လောင်စာဆီသုံးကား ရောင်းချခြင်းများကို ရပ်တန့်မဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံ
ပြင်သစ်နိုင်ငံဟာ လောင်စာဆီသုံးမော်တော်ကားများ အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ နိုင်ငံများ အဖွဲ့အစည်းထဲကိုပါဝင်လာပြီး ၂၀၄၀ ခုနှစ်မှာ လောင်စာဆီသုံး မော်တော်ကား ရောင်းချခြင်းများကို လုံးဝရပ်တံ့မယ်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၂၉ ရက် ကြာသာပတေးနေ့မှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Post Views:…
Published: July 10, 20177:49 am Updated: February 16, 20191:20 pm
Lockdown လုပ်ထားချိန်မှာ မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တဲ့ စုံတွဲ အဖမ်းခံရ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကြောင့် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတစ်ဝန်း လူစုလူဝေးမလုပ်ဖို့ တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားချိန်မှာ မင်္ဂလာဆောင် ကျင်းပခဲ့လို့ သတို့သား၊ သတို့သမီးနဲ့ မင်္ဂလာပွဲ တက်ရောက်သူပရိသတ်အားလုံး ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့က ကွာဇူးလူးနာတယ်မြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ကို ရဲတွေ ရောက်ရှိလာပြီး ပူပူနွေးနွေး ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်နဲ့…
Published: April 10, 20207:05 pm
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ခရီးသွားဧည့်သည် လာတာနည်းတဲ့အတွက် မြက်တွေပဲပြန်စားနေရတဲ့ ဂျပန်နာရာပန်းခြံက သမင်တွေ
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဝူဟန်မြို့ကနေ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သစ်ကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေနဲ့ ကူးစက်ခံရသူဦးရေတွေ မြင့်တတ်လျက်ရှိတဲ့အပြင် နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ အလည်အပတ်လာရောက်တဲ့ ခရီးသွားဧည့်သည်အရေအတွက်ကိုလည်း ထိုးကျသွားစေတယ်လို့ ဆိုရမှာပါပဲ။ အထူးသဖြင့် အာရှနိုင်ငံတွေမှာပါ။ ကျိုတိုမြို့အပါအဝင် ဂျပန်နိုင်ငံက ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကို ဆွဲဆောင်ထားတဲ့နေရာတွေဟာ ခရီးသွားဧည့်သည်တွေ အလာနည်းသွားခဲ့ပါတယ်။…
Published: February 11, 202010:53 am Updated: 10:54 am